March 2022 – MG Entertainment
တောင်ကြီးမြို့ အတုလမာရဇိန် ဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားအား ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူခဲ့တဲ့ အလှူမှတ်တမ်း ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေလာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး…
March 24, 2022 mg mg 0
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့က ပရိသတ် တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးက မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပရိသတ်တွေ လည်း သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ ပရိသတ်အချစ်တော် ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ဒီအလှူကို တောင်ကြီးမြို့မှ ာသွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးက တောင်ကြီးမြို့ မြို့လယ်ဓမ္မာရုံ အတုလမာရဇိန်ဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရား အား ရွှေသင်္ကန်းပေါင်း (၁၇၀၀၀) နဲ့အတူအလှူအားလုံးအတွက် […]
မွေးနေ့လေးမှာ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံး ကျန်မာချမ်းသာ ဘေးအန္တရာယ် တွေ ကင်းဝေးစေဖို့ တောင်းဆုချွေလိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်….
ပရိသတ်ကြီးရေ ကျော်ကျော်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မတ်လ (၂၄)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ကျော်ကျော်ရဲ့ မွေးနေ့ရက် မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဒီနေ့မွေးနေ့လေးမှာ သူ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးကြတဲ့ အနုပညာရှ […]
မကြာသေးခင်ကမှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ သူမတို့မိသားစုပိုင်ဟိုတယ်အသစ်စက်စက်ကြီးမှာ လာရောက်တည်းခိုဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့သမီးကြီး ပေါ်ရှာ
တစ္ခ်ိန္ကျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Smileဆိုတာနဲ႔မသိသူမရွိတဲ့နာမည္ေက်ာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အတူ ခ်မ္ းသာႂကြယ္ဝမႈေတြကေလးစားအတုယုဖို႔ေကာင္းေန တာပါ။ အလႉအတန္းေလးကိုလည္းမ်ားစြာလုပ္တာေၾက ာင့္ပရိသတ္တိုင္းအားက်ေ နရတာပါ။သူကေတာ့အသက္႐ြ ယ္ရလာတာေၾကာင့္အႏုပညာအလုပ္ေတြမလုပ္ေ တာ့ေပမယ့္သမီးႀကီးေလးကိုေတာ့အႏုပညာေ လာကမွေလွ်ာက္လွမ္းေစတာပါ။ ခုမွာေတာ့သူတို႔မိသားစုဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာေနထို င္ေနတာပါ။ သူမရဲ႕သမီးေလးကိုလည္းႏိုင္ငံျခ ားမွာ ေမာ္ဒယ္သင္တန္းေတြတက္ေရာက္ေစၿ ပီး ဝါသနာပါတာကို လုပ္ခိုင္းေနတာပါ။ဒါ့အျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္စမိုင္းလ္ကေတာ့အျခားစီးပြားေရးလု ပ္ငန္းႀကီးေတြအျပင္ ျပင္ဦးလြင္မွာလည္း […]
ဖြူဝင်းမွတ်ပြီး ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေ တဲ့ ပို့စ်လေးတွေ မျိုးစုံနဲ့ ပုရိသ တွေကို ကြွေစေပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်….
သင်ဇာကတော့ အနုပညာလောကမှာ sexy ကျကျနဲ့ စွဲမက်စရာ အလှတရားတွေကြောင့် ပုရိသပရိသတ် တွေကြား အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်နေသူပါ ။ အချိုးအစား ကျတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့လည်း မိန်းကလေးပရိ သတ်တွေကို အားကျချစ်ခင်စေသူလေး ဆိုလည်းမမှားပါဘူး ။ ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အများဆုံးရရှိ ထားတဲ့ သင်ဇာလေးကတော့ […]
CLL ကာကွယ်ဆေးထိုး စင်တာဖွင့်ပွဲကြီး မှ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
March 16, 2022 mg mg 0
မင်းသားချောလေးပိုင်တံခွန်ကတော့ ပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါ အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပကပရိတ်သတ် တွေကပါသည်းသည်းလှုပ် အားပေးဝန်းရံခံရတဲ့ မင်းသားချောလေးတစ်ယောက်ပါ။ တံခွန်က တောင့်တင်းကျစ်လျစ်တဲ့ဘော်ဒီအမိုက်စားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး တက်တူးတွေကဆိုရင်လည်း အရမ်းကို မိမိုက်ပြီး အထာကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တံခွန်က မကြာခင် ရက်ပိုင်းလောက်ကမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် အလုပ်တွေ အနည်းငယ် ပြန်လည် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိလာတာကို လည်းတွေ့ရပါတယ် […]